Ngaba iFlounder Intlanzi yamanzi abandayo-iBikeHike
Ikhaya » Zomxube » Ngaba iFlounder Intlanzi yamanzi abandayo
Ingaba iflounder ingamanzi abandayo?
Yeyiphi eyona ntlanzi ityiwayo emanzini abandayo?
Ziziphi iintlanzi zamanzi abandayo?
Loluphi uhlobo lwentlanzi iflounder?
Ithanda ubunjani ubushushu beflounder?
Ngaba udada njengemozulu ebandayo?
Ngaba iflounder iyintlanzi elungileyo yokutya?
Zeziphi ezi ntlanzi zine zingaze zityiwe?
Uthini umahluko phakathi kweentlanzi zamanzi abandayo kunye neentlanzi zamanzi ashushu?
Ziziphi iintlanzi ezinokuhlala emanzini afudumeleyo?
Yintoni intlanzi yamanzi ashushu?
Yeyiphi eyona ntlanzi icocekileyo?
Ngaba iflounder yihalibut?
Yeyiphi engcono icod okanye iflounder?
Yintoni umahluko phakathi kwe-sole kunye neflounder?
Ingena phi iflounder ebusika?
Yeyiphi eyona ndawo ilungileyo yokubambisa iflounder?
Ihlala phi iflounder?
Ngaba ukuloba iflounder kulungile ebusika?
Ngaba unako ukuloba iflounder ebusika?
Yintoni umahluko phakathi kweflounder yasehlotyeni nasebusika?
Ngaba iflowundi ithambile?
Ngaba kulungile ukutya iflounder yonke imihla?
Ziziphi iingenelo zeflounder?
ABANYE abaloli bamanzi anetyuwa kuNxweme lwaseMpuma baxhathisa imimoya yasebusika kaMatshi befuna iflounder yasebusika, uhlobo oluthile lwamanzi abandayo olubonakala kwintshona yeLong Island Sound ngokufuthi lubakho kufutshane noSuku lweSt.
Iiflounder zasebusika zezona ntlanzi zasemanzini abandayo. Enyanisweni, abagcini nje ukuphumelela emanzini abandayo, le ntlanzi ide ikhuphe emanzini abandayo, xa amanzi ehlala ebanda kakhulu ebusika nasentwasahlobo, ekuqaleni kukaDisemba eNorth Carolina kwaye ngasekupheleni kukaJuni kwiGulf of St.
Iintlanzi ezihlala emanzini amnyama nabandayo zinezinga eliphezulu le-Omega 3's. I-salmon, i-sardines, i-rainbow trout, i-anchovies, i-bass, i-herring, kunye ne-tuna yimithombo ecebileyo ye-omega 3 fatty acids.
Iintlanzi zamanzi abandayo ziquka i-salmon, ityhuna, i-mackerel, i-herring, i-trout, i-anchovies kunye nezinye iintlobo. Inkosi yemackerel, i-tilefish, i-swordfish, i-bigeye ityhuna kunye nokrebe zezona ziphezulu kwimercury, ilumkisa i-FDA.
IiFlounders liqela leentlobo zentlanzi ekuthiwa yiflatfish. Ziintlanzi ezifumaneka emazantsi olwandle ehlabathini lonke; ezinye iintlobo ziya kungena kumachweba.
Elona qondo lobushushu lamanzi lilungileyo lokubamba zonke iintlobo zeflounder ngokubanzi liphakathi kwe-55-68º F, nangona kukho umahluko ophawulweyo kukhetho lobushushu bamanzi phakathi kwe-flounder ye-Atlantiki, iPasifiki, kunye namanzi asemazantsi e-United States.
I-trout enamachokoza, intlanzi ebomvu kunye neflounder – ezona ntlobo ziphambili zaselunxwemeni – njengemozulu epholileyo. Nangona kunjalo, xa imozulu ibanda kakhulu, iindawo zoqhankqalazo zezi ntlanzi ziyacutheka.
Iinyaniso zeSondlo kunye neeNzuzo zeMpilo. Ifunyenwe emazantsi olwandle kunye nolwandle, i-Pacific Flounder yintlanzi ebalaseleyo ukuba ibe nesidlo sakusihlwa njengoko inika incasa emangalisayo kwaye isempilweni.
Ukwenza uluhlu "ungatyi" nguKumkani uMackerel, uShaka, iSwordfish kunye neTilefish. Zonke iingcebiso zeentlanzi ngenxa yokwanda kwamanqanaba emekyuri kufuneka zithathelwe ingqalelo. Oku kubaluleke ngakumbi kubantu abasesichengeni njengabantwana abancinci, abakhulelweyo okanye abancancisayo, kunye nabantu abadala.
Iintlanzi zamanzi ashushu zifumaneka emilanjeni, emilanjeni, kumachibi naselwandle. Iintlanzi zamanzi abandayo zifumaneka rhoqo elwandle. Iintlanzi zamanzi abandayo zikwafumaneka kumachibi nakwimilambo kodwa ngokuqhelekileyo kwiindawo ezibandayo kakhulu kwaye azifumaneki kumanzi angekho nzulu rhoqo njengeentlanzi zamanzi ashushu.
Iintlanzi ezikhula kakuhle kwiimeko zamanzi ashushu zezona zidla ngokufika engqondweni kuninzi lwabanini bamachibi. Ezi ziya kuba yiLargemouth Bass, Catfish, Bluegills okanye Sunfish, kunye neCrappies. Ezi ntlanzi zihlala ziqinile kulo lonke elase-US kwaye ziyakwazi ukusinda ebusika emantla.
E-Oregon, "intlanzi yamanzi afudumeleyo" ithetha umlomo omkhulu kunye ne-smallmouth bass, i-sunfish, i-crappie, i-channel catfish, i-bullheads, i-perch emthubi, i-walleye kunye ne-hybrid bass. Akukho nanye (ngaphandle kokuba i-Sacramento perch) ivela e-Oregon, kodwa uninzi luye lwaba khona ukususela ekupheleni kwe-19th okanye ekuqaleni kwe-20th inkulungwane.
I-5 yezona Ntlanzi zisempilweni enokutyiwa endle-Ezibanjwe eNdle i-Alaskan Salmon (kubandakanywa nezinkonkxiweyo) iiSardines, iPasifiki (ezibanjwe zasendle) i-Rainbow Trout (kunye nezinye iintlobo zeLake) iHerring. I-Bluefin Tuna. I-Orange roughy. ISalmon (iAtlantiki, ilinywa kwiipeni) iMahi-Mahi (eCosta Rica, eGuatemala nasePeru).
Iyamangalisa njengoko ivakala, iHalibut yiFlounder. I-Flounder ligama eliqhelekileyo losapho lweFlatfish lonke, kubandakanya iTurbot, iSole, iPlaice, kunye nokunye. IHalibut yinxalenye yaloo ntsapho.
I-Flounder inobume obucekeceke kakhulu kunye nencasa ethambileyo ethambileyo yeflounder. Ngenxa yobume bayo obuthambileyo, iifillet zeflounder zinzima kakhulu ukupheka umntu oqalayo. i-flounder, i-cod ithatha inzuzo encinci kuba kulula ukufunda indlela yokupheka i-cod fillets kune-flounder fillets.
Igama elithi "sole" libhekisela ngokukodwa kwiintlanzi kwintsapho yaseSoleidae ngokomyalelo wePleuronectiformes. Imele i-30 genera kunye neentsapho ze-130 zeentlanzi. Igama elithi "flounder" libhekisela kwiintlanzi kwiintsapho ze-Achiropsettidae, Pleuronectidae, Paralichthyidae kunye ne-Bothidae.
Iiflounder zasebusika zifuduka zisuka kwiindawo ezingaselunxwemeni ziye kumanzi akufuphi nonxweme ebusika, kulapho zithiywa khona igama lazo.
Njengoko sele sikhankanyile, iidokhi, ii-piers, amatye kunye neepiles zonke ziindawo eziphambili apho i-flounder (i-fluke) ithanda ukubeka kunye nokulalela ixhoba. Bangakwazi ukubamba iintlanzi ezininzi kwaye babonelele ngokhuseleko kwizilwanyana ezidliwayo ezifana namahlengethwa, ookrebe, kunye neentlanzi ezinkulu.
Bahlala phi? I-Flounder ziintlanzi zamanzi anetyuwa ezihlala zijinga kufutshane nonxweme, ecaleni kwe-Seaboard eseMpuma, kunye namachweba, imilambo, kunye nemilambo. Ebusika, zifudukela elwandle kwaye aziqheleki ukubuyela kumanzi angekho nzulu kude kube kusentlakohlaza.
Ukuloba i-flounder yasebusika kunokuvelisa njengeenyanga zasentwasahlobo kunye nehlobo, nje ukuba ixesha lakho kunye nendawo ilungile. Ubusika lixesha lokuzala kweflounder, kwaye kungafuneka uye kude nonxweme ukuze uyibambe ngeli xesha. Ukuloba iiflounder zasebusika kaninzi kufuna ukuba umise ezantsi.
Ewe, ungayibamba i-flounder kwiinyanga zasebusika kodwa kuya kufuneka ujolise kuyo kude nonxweme okanye kufutshane nesakhiwo sonxweme. I-Flounder iphumela kwiNyoba yaseMexico kunye noLwandlekazi lweAtlantiki ebusika ukuze izale ukuze kufuneke uye kude nonxweme iimayile ezingama-30 okanye ezingama-40 ukuze uzifumane ngeenyanga ezipholileyo.
Kulula: I-Winter Flounder imnyama kune-Summer Flounder. Banokujongeka phantse babemnyama - kungoko igama labo lesiqhulo, "Blackback". I-Summer Flounder inombala obomvu kunye nekhrimu okanye amabala amhlophe. Iiflounders ziyakwazi ukutshintsha umbala ukuze zihambelane neendawo ezizingqongileyo, nangona kunjalo, ubuso bazo yeyona ndlela iqinisekileyo yokuzahlula.
Ubume be-Flounder bukhaphukhaphu kwaye bubuthathaka, kwaye incasa yabo ithambile, kunye nencasa eswiti kancinci, okwenza kube lula ukuyisebenzisa ngeendlela ezahlukeneyo. Okona kudume kakhulu ukubhaka, ukuqhotsa, ukuqhotsa, kunye nefry flounder.
I-Flounder / yedwa - kanye ngeveki kakhulu.
Xa utya i-flounder, ufumana inani lezondlo ezixabisekileyo kunye neenzuzo zempilo. Okokuqala, yintlanzi enamafutha aphantsi, enekhalori ephantsi esebenza kakuhle njengomthombo weprotheyini kubantu abazama ukunciphisa umzimba. Kwakhona zikunika unikezelo olufanelekileyo lweevithamini B, i-phosphorus, kunye ne-magnesium.
Yintoni Iintlanzi zamanzi abandayo
Ziziphi iintlanzi ezidliwayo zamanzi abandayo
Impendulo eKhawulezayo: Yiyiphi intlanzi yamanzi abandayo enokuhlala kunye
Yintoni Intlanzi Enokuhlala Ngamanzi Abandayo
Ngaba iAnchovies Iintlanzi zamanzi abandayo
Impendulo eKhawulezayo: Ngaba i-Axolorls Iintlanzi zamanzi abandayo
Ngaba iiCichlids Iintlanzi zamanzi abandayo
Umbuzo: Ngaba Amasele ziintlanzi zamanzi abandayo
Impendulo eKhawulezayo: Ngaba iiNeons zamanzi abandayo ziintlanzi
Impendulo eKhawulezayo: Ngaba iiOscars zamanzi abandayo ziintlanzi